सन्दकपुर दैनिक ऊर्जाशील नेपालीहरूलाई रोजगारीको लागि बिदेश जान नपर्ने गरी रोजगारीको अभिबृद्धि गरिने कुरा धेरै पहिलेदेखि गरिँदै आएको छ । यसो भनिँदै गर्दा रोजगारीका अवसरहरू घट्दै गएका छन् । अहिले आएर कृषि रोजगारको अभाव खड्कन थालेको छ । नगदे कृषिमा जनतालाई आकर्षित गर्ने प्रयासहरू गरिन्छन् तर यसमा प्रभावकारिता न्यून रहेको पाइन्छ । अत्रबाली उत्पादनका लागि मजदूरहरूको अभाव भएकाले सो जग्गामा नगदेबाली
सन्दकपुर दैनिक अभावले अति निम्न, निम्न र मध्यम वर्गका नेपालीलाई ग्रसित तुल्याएको छ । बिहानबेलुका हातमुख जोर्नै समस्या निम्न वर्गमा विद्यमान छ र उनीहरू यसको लागि दैेनिक १८ घण्टा खट्न पनि तयार रहन्छन् । यस वर्गको लागि लाउने कपडा र बस्ने घरको कुनै चिन्ता रहत्र । शीत छल्ने झोपडीमात्र भए उनीहरूलाई पुग्छ र टालटुले कपडा लगाएर पनि निर्वाह गर्छन् । उनीहरू
सन्दकपुर दैनिक नेपालमा सम्पत्तिको खाँचो भएको बताइने गरेको छ । तर यथार्थमा नेपाल प्राकृतिक हिसाबले धनी छ, केवल यी स्रोतहरूको उचित प्रयोग गर्न नसकेकाले गरिबीको मात्रा बढेको हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन । सत्यता यो पनि छ कि विश्वका धनी मानिएका मुलुकहरू कुनै दैवी शक्ति प्रयोग गरेर धनी भएका होइनन् । उनीहरूले यस धर्तीमा भएका प्राकृतिक साधनहरूको प्रयोग गर्दै जाँदा अक्कलको विकास
आफू प्रधानमन्त्री हँुदा आफ्नो गृहजिल्लालाई विशेष दृष्टिले हेरिने गरेको कुरा नेपालका लागि नौलो होइन । सुर्यबहादुरले धनकुटा बनाए, पद्मसुन्दर लावतीले पाँचथर बनाए भन्ने उखान जस्तै प्रचलनमा छन् । इलामबाट उच्च ओहदामा पुगेका धेरै नेता छन् । बिगतमा प्रधानमन्त्री पनि इलामले बनाएकै हो । तर उक्त भनाइसँग इलामको कुरा त्यतिबेला मिलेन भन्ने स्थानीयस्तरमा गुनासो थियो ।या त सर्वोच्च ब्यक्तिले नै राष्ट्रलाई गृह
देशलाई एउटा शरीरसँग तुलना गर्ने होभने शरीर तन्दुरुस्त हुन जसरी सबै अङ्गहरूको समान विकास हुन जरुरी छ त्यस्तै देशका हरेक कुनाकाप्चा र दूरदराजमा बस्ने नेपालीले समान अनुपातमा जीवनयापन शैलीको अनुभूति पाउनु पर्छ । असार लागेपछि सीमित बजेट निकाशा गरेझैँ गाउँपालिकालाई बजेट तोकेर जे गर्नुपर्छ गर भत्रु भन्दा हरेक स्थानीय तहका आवश्यकतालाई प्रथमिकतामा ढालेर समयमै दामासाही बजेट काम हुने गरी पठाउन
राजनीति विकासको पर्याय बनोस्
देशमा राजनीतिक उथलपुथल बाराम्बार भइरहने तर विकास र सम्बृद्धि सुस्त रहेकोमा जनता चिन्तित छन् । राजनीतिले विकासमा थोरै हैँसे गरिदिएमा जनता आफैँ सम्बृद्धिमा लाग्नसक्ने कैयन लक्षणहरू छन् । सम्बृद्धिका लक्षले राष्ट्रिय महत्त्वका गुरुयोजनाहरू नथालिएका भने होइनन् । राजनैतिक खिचातानीले यी आयोजनाहरूको काममा बाधा पु¥याएकोले सम्बृद्धि आकाशको फल बनेको हो । जनताले सम्बृद्धि कसरी कहाँ पाइन्छ थाहा पाएका छन् । अलैँचीका
सन्दकपुर संवाददाता अहिले चुनावको माहौल छ । यत्रतत्र चुनावी सरगर्मी नै बढिरहेको छ । अभैm केही हप्तासम्म चुनावभन्दा बढी चर्चा कुनै पनि कुराको हुनेवाला छैन । दलहरू, नेताहरू, उम्मेदवारहरू, कार्यकर्ताहरू सबै चुनावी दौडाहामा ब्यस्त छन् । आफ्नो दललाई, आफ्नो दलको नेतालाई, आपूmलाई र आफ्ना बरिष्टहरूलाई भोट हाल्न मतदातासमक्ष बिनय गर्दै हिँडिरहेका छन्, सबै । चुनावमा भोट माग्न मतदातासमक्ष अनुनय बिनय गर्नु स्वाभाविक
जमिनमा पहाड राम्रो र अझ हिमाच्छादित पहाड झन् राम्रो मानिन्छ । पानीको भागमा समुद्र अति रमणीय हुन्छ । यसको कारण हो यी भागमा मानवोचित सौन्दर्य अनुभव गर्ने प्राकृतिक वातावरण हुन्छ । हिन्दू धर्म अनुसार श्रृष्टिपालक शिवजी हिमालमा बास गर्छन् । र, त्यो हिमाल भनेको निश्चय पनि हाम्रो अधिनमा भएको सगरमाथा हो । शिवजी सगरमाथाको चुचुरोबाट हामीले शान्त घोषणा गरिएको नेपाललाई
फलामलाई चाहेको आकारमा ढाल्न तताउनु पर्छ र तातेकै बेलामा घनले बजार्नु पर्छ । मानिसहरू घाम लागेको बेला बिस्कुन सुकाउने गर्छन् । देश अहिले चुनावी रौनकले तातेको छ । सदियौं देखि जनताको नाम राजनीतिकर्मीहरूको मुखमा झुण्डिएको भएपनि जनताले भनाइ सापेक्ष हकअधिकार नपाएको र यसकै कारणले आर्थिक बिपन्नताको भूँवरीमा पर्नु परेकोले देशलाई नयाँ प्रशासनिक संरचनामा लगेर गणतन्त्रात्मक शासनपद्धतिको माध्यमबाट जनतालाई अधिकतम सेवा
बहुदलीय पद्दतिमा चुनाव अगाडि दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्र जनताको विश्वास जित्न प्रचार गरिने झुठोपत्र मात्रै होइन । दलहरूले सत्तामा पुगेको खण्डमा वा तपाइँहरूले मेरो वा हाम्रो दललाई समर्थन गरेर भोट दिई विजयी बनाउनु भएमा यी कामहरू सत्तामा बसेर हामी पूरा गर्ने छौँ भनी जनतालाई लिखित जानकारी दिने माध्यम हो । दलहरूले चुनावको लागि गर्ने प्रतिष्पर्धा देश र जनताको भलाइका लागि
इलाम जिल्ला खोलानाला, तालतलैया, पहाड, खोच, उर्वर खेतीयोग्य जमिनले मात्र चिनिँदैन । यहाँका बासिन्दाको शिक्षाजन्य चेतनाको स्तर र परिआएका काममा देखाइने लगनशीलताले पनि परिचय झल्काउने गरेको छ । इलामेली जनताका परिश्रमको फलस्वरुप इलामलाई विविध ‘अ’ले चिनाउने गरेको छ । चिया, जडिबुटी, काठ, अन्नबाली उत्पादन तर्फपनि इलाम कहिल्यै दूर्नाम छैन । तुलनात्मक हिसाबमा शैक्षिक जागरणमा अग्रणी रहेको छ । शिक्षण, सरकारी
अहिले सुदुर पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाको ब्यापारिक केन्द्रमा चिनिएको बिर्तामोड नगरपालिकामा कप्mर्यू जारी छ । यो अवस्था भनेको नागरिकको जविनरक्षामा दोश्रो कुनै बिकल्प नभएको अवस्थामा प्रयोग गरिने कानूनी निर्णय हो । चिनजानको घरमा बिदेशबाट पठाएको जुत्ता लिन गएको अर्जुनधारा वडाका ११ बर्षिय वालक लक्ष्मण शिवाकोटीको असोज १४ गते भएको शङ्कास्पद मृत्युको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका
सन्दकपुर नेपाली किसानहरू अभागी हुन् वा उनीहरू कृषिमा सिद्धहस्त छैनन्, आजको गहन चिन्तनको बिषय बनेको छ । नेपालको कृषि प्रणालीमा परम्परागत प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोमा विज्ञ, ब्यापारी र किसान सबैपक्ष सहमत छन् । सरकार त झन् लगानी र योजनाका साथ कृषि विकासमा लागेको छ । एउटा लज्जास्पद बिषय उपस्थित भएको छ कि नेपालमा ७५ प्रतिशत खानेकुरा तयारी वा कच्चा रुपमा
पर्वको उल्लाससँगै राजनीतिक सरगर्मीले राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । दलहरू आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावी तयारीमा व्यस्त छन् । चुनावी नजिता आफूतिर पार्न तालमेल, मोर्चाबन्दीलगायतका रणनीति बनाउन जुटेका छन् । सँगै उम्मेदवारको छनोट र घोषणाका क्रम पनि सुरु भइसकेका छन् । उम्मेदवार छनोटको अभ्यास हुँदै गर्दा नेता–कार्यकर्ताको दौडधूप त्यही मात्रामा बढेको छ । आकांक्षी धेरै हुँदा तिनको व्यवस्थापनसँगै योग्य उम्मेदवार
गाउँमा भन्दा शहरहरुमा बढिमात्रामा सुबिधा हुनु सभाविक हो । नेपाललाई गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भन्ने गरिन्छ । जीवन यापनमा शहरी वातावरण सहज रहन्छ तर त्यसका लागि आर्जनको मात्रा बढि हुन पनि जरुरी छ । शहर भन्ने बित्तिकै बाँणिज्य र उद्योग ब्यवसायलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । मानवीय आवश्यकताका अनिवार्य सुबिधाहरु जसतै शिक्षा, स्वास्थ्य,
संघीय गणतान्त्रिक संविधानले तोकेका राज्य पुर्नसंरचना अनुसारको स्थानीय तहको निर्बाचनको अन्तिम चरणको कार्यक्रम आगामी असोज २ गते २ नं. क्षेत्रको चुनाब पछि पूरा हुने छ । संघीय संबिधानले स्थानीय तहलाई बढि अधिकार दिएको छ । ती अधिकारहरुको लक्षमा जनता रहेका छन्, निर्वाचित प्रतिनिधीलाई मात्र अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजिएको होइन । स्थानीय तह निश्चय पनि देश निर्माणको आधार हो तर स्वायत्तता
साविक इलाम नगरपालिका क्षेत्रको घना बजार एरिया भनेको साविककै वडा नं. १ र २ थिए । वडा नं. ३, ६ र ७ मा राजमार्गको पायकमा गाउँले तरिककाका केही पसलहरु बाहेक नगरबस्ती भएका गाउँ थिए जहाँ नागरिकहरुको मुख्य पेशा कृषि नै रहिआएको पाइन्छ । हाल इलाम नगरपालिकामा अरु ६ वटा गाबिसहरु गाभिएका छन् । बर्बोटेको बिब्ल्याँटे र साँखेजुङको नेपालटारमा बजारका केही
हाम्रो प्राण रक्षाको माध्यम मुख्यतया हामीले खानेकुराहरु हुन् । भोक लाग्छ जब शरीरलाई खानाको आवश्यकता हुन्छ, तब खाना चाहिन्छ । शरीरका आन्तरिक अङ्गहरु हाम्रो इच्छा र आदेशमा चल्दैनन् । स्वचालित अङ्गहरु अनवरत कार्यरत रहन्छन । सबै अङ्गहरुको कार्य बिभाजन प्रकृतिले नै गरिदिएको छ । एकको काम अर्कोले गर्ने कुनै सम्भावना छैन । हामीले आहारमा प्रयोग गरिने धेरै बस्तुहरु छन् ।
इलाममा शुक्रबार लाखे जात्रा शुरु गरिएको छ । नागपञ्चमीका दिनदेखि कृष्णजन्माष्टमीसम्म नेवार जातीको परम्परागत पर्वअनुसार प्रत्येक वर्ष मनाइने लाखेजात्रा यसपटक पनि शुरु गरिएको हो । लाखेजात्राप्रति स्थानीय बासिन्दाको मोह निकै गहिरो छ । शुक्रबार लाखेजात्रा निकाल्दा त्यसलाई नियाल्न उपस्थित भएका स्थानीय बासिन्दा (बालबालिकादेखि बृद्धबृद्धासम्म)को भीडले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । लाखेजात्रा रोपाइँजात्रासम्म पुग्दा त इलाम बजारमा ठूलै मेला लागेसरह भीडभाड हुन्छ ।
आधुनिक औद्योगिक र राजनीतिक क्रान्तिको उद्गम भूमिका रुपमा रहेको विक्रम सम्बत् १९९३ मा स्थापित नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलको व्यवस्थापन पक्षले चार वर्षदेखि बन्द भएको उद्योग आगामी मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु गराउने प्रेरणा समेत मिलेको यो उद्योग यसअघि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युतभार कटौतीका कारण पटक–पटक बन्द हुने